[OFFICIAL] dr.fone Toolkit --Android Data Recovery The Best For 2017
dr.fone yamathuluzi --Android Data Recovery
isofthiwe emhlabeni 1st yokutakula idatha for Android Smartphones kanye amaphilisi.
Aphakeme kakhulu ekululameni izinga embonini.
Ihambisana namadivayisi Android 6000+.
Ukunikezwa okubalulekile (kuselula kuphela)
Thenga-Windows Thenga ye-Mac
Qaphela: Sebenzisa uhlelo kukhompyutha yakho ye-Windows / Mac OS.
Lost Idatha kusuka ku-Android?
idatha Lost elahlekile. Asikwazi alulame amafayela asusiwe ku-Android kusuka zimo eziningi ezifanayo abazithandayo.
Ikhadi le-SD Inkinga
Iphutha ukhula lwenkohlakalo egcwele
idatha Lost ngemva ifektri ukubuyisela
idatha Lost ngenxa OS buyekeza
Idatha badukile ngemuva ukhula lwenkohlakalo egcwele noma ROM Siyafulesha
Hlola & kuqala ngoba Mahhala
Uma basuke bengazi ukuthi idatha yakho elahlekile Android kungenziwa zibuyiswe noma cha, ungalanda cala version khulula ukuskena kuqala. Emva scan, ungakwazi kuqala idatha etholakele. Kumahhala.
Amafayela abahlukahlukene Ingabe ukuyithola
Le software Android yokutakula idatha kukuvumela uthole oxhumana nabo abasusiwe noma ilahleke, imiyalezo, izithombe, imiyalezo WhatsApp, umculo, amavidiyo kanye imibhalo ngaphezulu.
Uma uthola idatha yakho elahlekile kudivayisi Android, ungakhetha noma iyiphi into ofuna futhi usilondoloze kukhompuyutha yakho ngokuchofoza okukodwa.
Ukusekela 6000+ onobuhle Android
Ungasebenzisa lolu hlelo lokusebenza yokutakula idatha Android ukuze alulame idatha kumaselula phezu 6000 Android ne amaphilisi kusuka Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, njll Uhlu kumadivayisi asekelwe usakhula ngokushesha.
Ugxilile & Unrooted Amadivayisi e-Android
Leli thuluzi yokutakula idatha le-Android lusebenza kokubili amadivayisi we-Android nigxilile futhi unrooted, kodwa ngeke kushintshe lutho kuso. Idivayisi ibangelwa uzobe usazimelele, umuntukazana unrooted uyophinde ahlale.
Phinda Data kusuka SD Card
Njengoba ekhadini le-SD ku-Android, ungakwazi ngqo scan efonini noma kuthebulethi yakho, noma ixhume umfundi ikhadi. Bobabili umsebenzi.
Le software Android yokutakula idatha ofunda idatha kuphela efonini yakho ye-Android noma ithebhulethi. Ngeke ushintshe noma yini, ukugcina noma avuze lutho kudivayisi yakho kwabanye.
yokutakula idatha Android umsindo into kuhle okhokhelwayo. Ngempela, abantu kodwa ngaphandle amakhono computer professional ungakwazi ukubhekana naso kalula. Skena, ukuhlola kuqala bese alulame. Odinga ukwenza lezi umntwana izinyathelo ezintathu.
Zonke abasebenzisi le software Android yokutakula idatha ungakwazi ukujabulela kokuthuthukisa khulula esikhathini esizayo. Isevisi yekhasimende kufakwe.
Skena ukuze alulame idatha isuswe kumadivayisi Android
Skena imemori khadi yakho kudivayisi Android ukuze alulame idatha
Zama It Khulula For Days 30!
Buka kuqala Iyatholakala
Phinda yonke idatha, noma amafayela akhethiwe
idatha akhona ngeke overwritten
Kuphela ongakwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho futhi amafayela
3 izinyathelo ezilula: ukuxhuma, ukuskena futhi alulame Android
Sezinsuku ezingu-30 mahhala
" Dr.fone yamathuluzi kuyinto lokusebenza ideskithophu-Windows PC. Vele uyifake, bese uvula uhlelo bese uxhuma idivayisi yakho kukhompyutha yakho. Kusuka lapho, ungakwazi ukucinga wezithombe ezisusiwe, imiyalezo, ama-video, oxhumana nokuningi kalula. Funda kabanzi >>
- Kusukela Softonic, ehamba phambili software yezimanga abantu abayizigidi ezingu-100 ngelanga
" Dr.fone yamathuluzi-Android ine kulula ukuyisebenzisa interface ukuthi kungaba navigation abasebenzisi wonke amazinga ubuchwepheshe. Kuyinto engasindi futhi akasebenzisi semali system imithombo. Sekukonke, le kunalokho ewusizo tool ungakuphi ungase uphume isimo ambalwa okunamathelayo uma kuziwa yokutakula idatha idivayisi yakho ye-Android. Funda kabanzi >>
Kuhle Data Recovery Software
UDkt Fone ine-UI emangalisayo elula nge isinyathelo-by-step imiyalelo ngokumangalisayo kuchazwe, ngakho akukho lutho olungasehlukanisa mhlawumbe yonakale. Lona best Data Recovery Software Ngiye uhlangabezana.
Ngu Ammar Syed
Kuyasebenza !!!!!!!!!!!!!!! =)
Ingabe kokuthuthukisa Android ku-S6 yami 5.1.1 noxhumana nabo yami wanyamalala (njengoba kuthanda eyakho). UDkt Fone walulama uhlu oluphelele (nanyana ngingazange ngiye siyikhiphe ifoni yami yokuqala). Isebenzisa zindlela ezinye ukukhipha idatha. Inani elincane ukukhokhela omkhulu imbongolo ukonga.
Indlela Phinda ezisusiwe imiyalezo esuka Amadivayisi e-Android